भारतका लागि बज्यो खतराको घण्टी : पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री थाले यस्तो तयारी ! « Janaboli
भारतका लागि बज्यो खतराको घण्टी : पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री थाले यस्तो तयारी !
इस्लामाबाद । भारत पाकिस्तानबीचमा फेरि चिसोपना देखिने भएको छ । पाकिस्तानले वार्ताको लागि आह्वान गर्दा पनि भारतले वेवास्ता गर्दै आएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले फेरि भारत विरुद्ध कडा कदम चालेका छन । लामो समयदेखिको दुश्मिनीलाई खानको यो कदमले झनैं तनावपूर्ण बन्ने देखिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान हालैं पाकिस्तानी शक्तिशाली जासूस एजेन्सी आईएसआईको मुख्यालय गएका छन ।
उनले देशको रक्षाको पहिलो रेखा नैं आइएसआई भएको बताएका छन । एक आधिकारिका अनुसार, अन्तर सेवा खुफिया (आईएसआई) का वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीसँगैं सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले पनि रणनीतिक खुफिया र राष्ट्रिय सुरक्षा समस्याबारे छलफल गरेका छन ।
सेना मिडिया सेन्टर अन्तर सेवा सार्वजनिक सम्बन्ध ९आईएसपीआर० द्वारा जारी बयानअनुसार, प्रधानमन्त्री खानले नेशनल सुरक्षामा आईएसआई को योगदानको चर्चा गरेका छन । आतंकवाद को रोक्न भएको प्रयास को तारिफ गरेका छन । उनले भने, “आईएसआई हाम्रो पहिलो रक्षा लाइन हो र विश्वको सबैभन्दा उत्तम खुफिया एजेन्सीको रुपमा काम गरिरहेको छ।”
खानले आईएसआई अधिकारीहरूलाई बताए कि उनको सरकार र पाकिस्तानका जनता सशस्त्र सेना र खुफिया एजेन्सीहरूको साथमा छन । खानले यी संस्थाहरूको अभूतपूर्व उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गरेको समेत्त बताएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन ।
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर छली मुद्दामा २३ महिना जेल जाने !
काठमाडौं । विश्वका चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर छली मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
एकैं समयमा दुई शक्तिशाली भुकम्प,मान्छेहरुको भागाभाग !
जकार्ता । इन्डोनेसियामा मङ्गलबार केही समयको अन्तरालमा दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको
चीनको अर्को चमत्कार,एउटैं समयमा दुईवटा भूउपग्रहको सफल प्रक्षेपण !
जिक्वान । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा प्रगति गर्दै अगाडी बढेको चीनले फेरि अर्को
बच्चा नजन्माएको भन्दैं श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउने प्रयास !
काठमाडौं । आजको हाम्रो समाज कत्ता जाँदैंछ कसैंले सहजैं भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैंन ।